Tsy misy ny arakaraka, hoy izy. Natao izao hetsika izao mba hametrahana ny fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny fanjakana.150 basy tsy nisy taratasy no voaangona manerana an’i Madagasikara ny faran’ny taona 2018 ka hatramin’ny fiandohan’ny volana mey. Fanapahan-kevitra avy amin’ny filoham-pirenena moa izao fanitarana izao indray ny fahafahana manatitra ireo fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Misy karazany ny basy dia ny sokajy voalohany izay ambara fa fitaovana fiarovan-tena sy ny sokajy faharoa izay fitaovam-piadiana mahery vaika. Tsy maintsy atao isan-taona ny fanavaozana ny taratasy momba ny fihazonana ny basy, ary tsy mantsy manana taratasy fahazoan-dalana ny mpihazona basy. Tsy tokony hanana basy mahery vaika sokajiana ho “arme de guerre” tahaka ny Kalachnikov sy ny MAS 36 ny sivily araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Tsy maintsy giazana ireo basy tsy ara-dalàna ,hoy hatrany ny fanazavana. Mitohy ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ary miasa andro aman’alina ny mpitandro filaminana. Niaiky moa omaly ireo lehibe fa tena misy ny mpitandro ny filaminana miray tsikombakomba amin’ny jiolahy ary efa nisy naiditra am-ponja izy ireny.